More ndị edemede na ndị edemede sitere n'otu ebe na La Mancha akpọ La Solana | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ọtụtụ ndị edemede na ndị edemede sitere n'otu ebe na La Mancha akpọ La Solana
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Abụọ, Aterlọ ihe nkiri
Daysbọchị ole na ole gara aga mere ụtụ ma mepee windo maka ụwa maka ụfọdụ ndị edemede na ndị edemede sitere n'obodo m, Solana, nke gụnyere m site mbido dika onye ode akwukwo. Ma n'ezie, ọ gaghị ekwe omume ịhapụ aha m chọrọ ịnọgide na-agbake. Taa bụ atọ ndị a: abu abuo ma odeakụkọ na odeakụkọ. Ma m ga-ekwukwa ndị ọzọ solaneros dere nke amaokwu ahụ na ebe a na-eme egwuregwu. Biko, lee anyị anya. Knowsnye maara akụ ederede nke a na-achọpụtabeghị.
2 La Solana na sickles - Aurelio Maroto
3 Site n'ụsọ mmiri a - Francis Alhambra
3.1 More aha
Nwa okorobịa a na-ede uri Afọ 29 abanyela na otu ìgwè solaneros na-eto eto ma na-ede ma na-ebipụta. Nke a bụ ọrụ ya nke mbụ ọkọnọ izu ole na ole gara aga, a nchịkọta uri na o jisiri ike idezi ekele maka mgbasa ozi na-aga nke ọma.
Silfra bụ a ezigbo uri uri, edere n'otu ụtụtụ n'ihu kọmputa ma mụọ site na mkpali nke ozi sitere na nwanne nwanyị onye edemede ebe ọ gwara ya banyere Silfra, ebe dị na Iceland. Ọ nyochara ụgbụ ahụ, hụ foto ma akụkọ ya masịrị ya. Ọ hapụrụ onwe ya ka eburu ya wee pụta ihe niile wee pụta onwe ya, ya mere, mkpokọta uri a, dịka onye edemede ahụ kwuru, "na-enwekwu mmetụta karịa ịghọta ya." Akwụkwọ ahụ enwere ike ịchọta ya na akwụkwọ na usoro dijitalụ.
La Solana na mma owuwe ihe ubi - Aurelio Maroto
Onye nta akụkọ Aurelio Maroto bụ otu n’ime aha ndi akacha mara amara nke omenala solanero ọ bụkwa nwa nwoke, nwa nwa na nwa nwanne nke ezigbo ndị oji mma sickle, otu n'ime njirimara njirimara nke La Solana. Na-eme ka sickle Ọ bụ ihe karịrị narị afọ abụọ ndụ anyị kachasị mma na nke kachasị mma yana o mekwara anyị nnukwu onye nrụpụta mba nke ngwa ọrụ a. Kedu onye ka mma karịa Aurelio ịkọ akụkọ ya dika ụtụ nye ọbara-ya na nke ndi-nnu-ọla nile solaneros.
E bipụtara ọrụ a na 2014 ma ọ bụ ọrụ afọ abụọ nke ahaziri 16 isi na karịa peeji 230. Ejiri ọtụtụ ajụjụ ọnụ maka ndị ọrụ okike lara ezumike nka na ndị rụpụtara ụgwọ maka obere akwụkwọ ọgụgụ dị na isiokwu ahụ.
Site n'ikpere mmiri a - Francis Alhambra
Francis Alhambra nwere ike onye amara amara na onye a ma ama na-agụ egwú nke La Solana mana, karịa ihe niile, ọ bụ ọmarịcha abụ na-edebekwa egwu na olu kwesịrị ekwesị maka amaokwu ya. Otu onye otu Achịcha ọka wit Kemgbe 1991, onye nwere ọdịnala na ama ama na mpaghara na mpaghara, o jirila ndụ ya niile jiri ụbọ akwara ma kọwaa ụwa na egwu ya na okwu ya.
Na-aga site na ninties mgbe ọ malitere itolite n’ụzọ dị mkpa karịa akụkụ ya dị ka ọkwọ-songwriter. Ha bụ naanị otu egwuregwu agbakwunyere na mmekorita ya na ndị edemede na ndị omenkà ndị ọzọ ( Ọ na-esonye na ememme mpaghara na egwu.
Ọ bipụtala uri na akwụkwọ 1996 Kpochapụ amaokwu abalị, olu nke nchịkọta Espiga nke Pan de Trigo depụtara, yana na akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa nke otu ndị edemede a. Ma ọ bụ n'ime 1997 kedu mgbe ị kpebiri ibipụta akwukwo nke abu a, Site n'ikpere mmiri a.
N'ihi na a ka nwere ọtụtụ ndị fọdụrụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọzọ uri na-eme Pan de Trigo dị ka Rosa Marín, Juan José Torrijos ma ọ bụ María José Pacheco, Ramona Romero de Ávila ma ọ bụ Domingo Fernández.
Apụghị m ịhapụ ma eleghị anya ndị kasị ghọtara onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na onye na-ede akụkọ banyere Villa de La Solana (site na ikike site n'aka onye nọchiri ya na Paulino Sánchez lara ezumike nká n'oge na-adịbeghị anya). Don Antonio Romero Velasco na -bụ mmadu, onye m ka na-echeta nke ọma n'ihi na ọ bụ ezigbo enyi nna nna m yana, kwa, nnukwu ọkọ akụkọ ihe mere eme nwere ọtụtụ akwụkwọ bipụtara dị ka Akụkọ banyere La Solana o Mmekọrịta akụkọ ihe mere eme na ọdịdị, ofufe, nsọpụrụ na ịnyefe nke Virgin Virgin nke Peñarroya, kpọtụ nanị aha ole na ole.
Na nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, m na-ezo aka na edemede ọzọ bipụtara oge opupu ihe ubi a banyere enyi m, onye isi, onye na-eme ihe nkiri na onye na-egwu egwuregwu Mari Carmen Rodriguez-Rabadan. Ma ọ bụ na Sọnde gara aga (re) gosipụtara ọrụ ọgbara ọhụrụ nke aka ya, 204lọ XNUMX, ịwa ahụ, nke m nwekwara ihu ọma imezigharị na, ya mere, ịnụ ụtọ na ịchị ọchị n'ihu onye ọ bụla ọzọ nwere egwuregwu ọdịnala, juputara n'ịkpa ọchị na ọchị bụ nke masịrị ọha na eze.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Ọtụtụ ndị edemede na ndị edemede sitere n'otu ebe na La Mancha akpọ La Solana
Ọgụgụ ojii 5 ọzọ maka Black Friday a. Mgbakọ na akụkọ
"Mpụ nke ọdọ", ụjọ na echiche efu n'aka Gemma Herrero.